Akhriso: Somaliland oo Fannaaniin ka saartay Liiska Koox faneedka & Safarada Hargeysa oo laga mamnuucay - Caasimada Online
Home Warar Akhriso: Somaliland oo Fannaaniin ka saartay Liiska Koox faneedka & Safarada Hargeysa...
Akhriso: Somaliland oo Fannaaniin ka saartay Liiska Koox faneedka & Safarada Hargeysa oo laga mamnuucay
Hargeysa (Caasimada Online)-Warbixin ay goordhow soo saaren Koox fanneedka Xidigaha Geeska ee ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in Fannaaniinta kala ah Nimcaan Hilaac iyo Yurub Geenyo laga saaray Kooxda.
Warbixinta ayaa lagu muujiyay dhaliilaha labadaasi Fannaan looga saaray Kooxda waxaana lagu sheegay inay ka baxeen xeendaabka iyo sharciyada u degsan Kooxda.
Warbixin qoraal ah oo kasoo baxay Kooxda laguna daabacay beejajka Warbaahinta Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Safarka labadaasi Fannaan ee magaalada Muqdisho ay ka dambeysay kadib markii ay jabiyeen qawaaniin u dagsanaa kooxda .
Fannaaniintaani ayaa waxaa sidoo kale laga mamnuucay inay u safraan magaalada Hargeysa iyadoo waaxda socdaalka maamulka Somaliland aysan u ogolaan doonin Hargeysa iney soo galaan labadan fannaan, sida lagu sheegay warbixinta.
Fannaanka da’da yar Nimcaan Hilaac ayaa dhowrkii bil ee ugu danbeysay deegaan ku ahaa magaalada Muqdisho oo si weyn loogu soo dhaweeyay, kadib markii uu ka gadooday tallaabooyinka Somaliland ay ku caburineyso isla markaana xoriyada uga qaaday.
Fannaanada Yurub Geenyo ayaa iyana Seddexdii bil ee ugu danbeysay kamid noqotay Fannaaniinta garwaaqsaday inaanu kala go’in Somalia waxa ayna sidoo kale kamid noqotay Fannaaniinta deegaanka ku ah Magaalada Muqdisho.
Labada Fannaan ayaa kamid ah kuwa loogu jecelyahay Fannaaniinta waxaana muuqaneysa in Somaliland ay carqalad ku tahay Fankooda iyadoo aan kala saarin Siyaasad iyo Xoriyada.
Tallaabada lagu caburinaayo labada Fannaan ayaa soo ifbaxday kadib markii Fannaaniin dhowr ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda Somaliland lagu xiray magaalada Hargeysa iyadoo xarigooda loo sababeeyay imaanshiyahooda magaalada Muqdisho.